भारतीय विद्यार्थीको रोचक विरोध शैली, “मोदी पकौडा” प्रहरीको नियन्त्रणमा - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
भारतीय विद्यार्थीको रोचक विरोध शैली, “मोदी पकौडा” प्रहरीको नियन्त्रणमा
चण्डीगढ । भारतीय लोकसभा निर्वाचन करिव अन्तिम अवस्थामा पुग्दै गरेको समयमा भारतको चण्डीगढमा विचित्र किसिमको विरोध प्रदर्शन गरिएको छ ।
इन्जीनियरिङ र कानूनका विद्यार्थीद्वारा गरिएको विचित्र शैलीको विरोध प्रर्दशनमा “मोदी पकौडा”बेचिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री मोदीले अन्तरवार्ता दिदै भनेका थिए । मानिस पकौडा बेच्दै दिनमा दुई सय रुपैयाँ कमाइरहेका छन् । उनीहरुलाई बेरोजगार मान्न सकिदैन ।
ब्याचलर पास गरेका विद्यार्थीले प्रधानमन्त्री मोदीको उक्त भनाईलाई ब्यङ्ग गर्दै हामी पकौडा योजना अन्तरगत नयाँ रोजगार दिदैं मोदीको स्वागत गर्न आएका हौं । हामी प्रधानमन्त्री मोदीको र्यालीमा पकौडा बेच्न चाहान्छौं । यसबाट मोदीले जान्न सकुन कि पढे लेखेका युवाका लागि पकौडा बेच्ने काम कति महान हो ।
प्रधानमन्त्रीको पकौडा योजनालाई कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले भनेका थिए । याे धेरै दुखको कुरा हो कि प्रधानमन्त्री मेक एन इण्डिया र स्टार्ट अप इण्डिया जस्ता महत्वकाँक्षी योजनाको कुरा गर्छन । साथै शिक्षित युवालाई पकौडा बेच्न सल्लाह दिन्छन् ।
सन १९७० पछि भारतमा सबैभन्दा ठुलो बेरोजगारीको समस्या रहेको भन्दै विद्यार्थीहरुले निकालेको पकौडा जुलुसमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दै पकौडा सहित १२ विद्यार्थी गिरफ्तार गरेको छ ।
पकौडा व्यापार प्रति खिल्ली उडाउँदै मोदीलाई निशाना साध्दै लालुपुत्र तेजस्वी यादवले भने, यदि हरेक नागरिक पकौडा बेच्न थाले कसले खान्छ ? कसले किन्छ ? पूर्वअर्थमन्त्री पी चिदमबरमले भने, भीख माग्नु पनि एक किसिमको बेरोजगारी हो । आज भएको पकौडा जुलुसमा यादव र चिदमबरमको कुरा गर्दै हरेक युवा विद्यार्थी मोदी पकौडा सहित जुलुसमा सहभागी हुँदा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको चण्डीगढ प्रहरीले जनाएको छ ।